वेब गोपनीयता - जेफरसन केन्द्र - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
मानसिक स्वास्थ्यका लागि जेफरसन सेन्टर एक स्वतन्त्र, नाफा नकमाउने संस्था हो जसले उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र व्यक्ति, परिवार र हाम्रो समुदायको लागि जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ।
कृपया नोट गर्नुहोस्, हामीले हाम्रो गोपनीयता अभ्यासहरूको सूचना अपडेट गरेका छौं। थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो कुनै तेस्रो पक्ष विज्ञापनदाता छैन। हामी तेस्रो पक्षको साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा गर्दैनौं।
हाम्रो केहि विशेष घटनाहरू र कक्षाहरूको लागि हामी अनलाइन रेजिष्ट्रेसन प्रस्ताव गर्दछौं। रेजिष्ट्रेसनको बेला प्रयोगकर्ताले सम्पर्क जानकारी (जस्तै नाम, फोन नम्बर र इ-मेल ठेगाना) दिन आवश्यक छ यदि तपाईंलाई सम्पर्क गर्न मिति वा स्थानमा परिवर्तन भएमा। यदि तपाईंले हाम्रो कुनै पनि कार्यालयमा ठेगाना जानकारी पूरा गर्नुभयो भने हामीसँग त्यो छैन त्यसैले हामी तपाईंलाई दर्ता गर्ने प्रत्येक घटनाहरूको लागि दर्ता जानकारी पूरा गर्न आवश्यक पर्दछ।
हामी प्रयोगकर्ताबाट हाम्रो अनलाइन दान फारममा जानकारी अनुरोध गर्दछौं। एक प्रयोगकर्ताले सम्पर्क जानकारी र वित्तीय जानकारी प्रदान गर्नु पर्छ। यो जानकारी हिसाब प्रयोजनका लागि प्रयोग गरीन्छ। यदि हामीलाई अर्डर प्रशोधन गर्नमा समस्या आएको छ भने, जानकारी दातालाई सम्पर्क गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। सुरक्षा जानकारी "सुरक्षा" सेक्सनमा छलफल गरिएको छ।
यदि तपाईं मानसिक स्वास्थ्यको लागि जेफरसन सेन्टरबाट भविष्यमा सञ्चारहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्न भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् webmaster@jcmh.org वा (303०425) 0300२XNUMX-०XNUMX००। तपाइँले हामीलाई तपाइँको बारेमा राख्ने जानकारीको विवरण प्रदान गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै उचित अनुरोधहरू समायोजित गर्दछौं।
प्रोफाइल - हामी हाम्रो वेबसाइट को व्यक्तिको उपयोग ट्र्याक गर्दैनौं। प्रयोगकर्ताले हामीलाई दिन छनौट गरेको कुनै जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा तिनीहरूको गतिविधिसँग सम्बन्धित छैन।
कुकीहरू - कुकी भनेको प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको डाटाको एक टुक्रा हो जुन प्रयोगकर्ताको जानकारीसँग सम्बन्धित हुन्छ। हामी हाम्रो साइटमा कुकीहरू प्रयोग गर्दैनौं, हाम्रो साइटको दान भाग बाहेक, हाम्रो Miva Merchant Store। त्यहाँ, कुकीले तपाईले प्रविष्ट गरेको डाटा ट्र्याक राख्दछ (तपाईंको किनमेल कार्ट) त्यो एकल भ्रमणको क्रममा। जब तपाइँ तपाइँको ब्राउजरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ कुकी तपाइँको कम्प्युटरबाट हटाइएको छ। तपाईंको दान गतिविधि कुनै पनि हिसाबले तपाईंको साइटको बाँकी साइटमा सम्बन्धित छैन। जहाँसम्म, एकल नाम / ठेगानाबाट सबै चन्दाहरू हाम्रो डाटाबेसमा सहसंबंधित छन्।
लग फाइलहरू - धेरै मानक वेबसाइट सर्वरहरू जस्तै हामी लग फाइलहरू प्रयोग गर्छौं। यसमा कुल पृष्ठ दृश्यहरू, कुल हिटहरू, कुल फाइलहरू पठाइएको, क्यास गरिएको कुल फाइलहरू, अन्य प्रतिक्रिया कोडहरू, कुल KB अनुरोध, कुल केबी स्थानान्तरण, क्याबले बचत गरेको कुल केबी, कुल अद्वितीय यूआरएलहरू, कुल अद्वितीय साइटहरू, कुल प्रयोगकर्ता सत्रहरू र कुल लग फाइल समावेश गर्दछ। प्रविष्टिहरू पढ्ने / प्रशोधन गरिएको। हामी यो जानकारी प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न, साइट प्रशासित गर्न, समुहमा प्रयोगकर्ताको आन्दोलन ट्र्याक गर्न र समग्र प्रयोगको लागि व्यापक जनसांख्यिकीय जानकारी भेला गर्न प्रयोग गर्दछौं। हाम्रो लग फाइलहरूमा स collected्कलन गरिएको कुनै पनि जानकारी व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारीसँग लिंक गरिएको छैन।
लिंक - यस वेबसाइटले अन्य साइटहरूमा लिंकहरू समावेश गर्दछ। कृपया सावधान रहनुहोस् कि हामी, मानसिक स्वास्थ्यका लागि जेफरसन सेन्टर, त्यस्ता अन्य साइटहरूको गोपनीयता अभ्यास वा सामग्रीको लागि जिम्मेवार छैनौं। हामी हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई सावधान हुन प्रोत्साहित गर्दछौं जब तिनीहरूले हाम्रो साइट छोड्छन् र प्रत्येक र प्रत्येक वेबसाइटको गोपनीयता कथनहरू पढ्नको लागि जुन व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी सlects्कलन गर्दछ। यो गोपनीयता कथन मात्र यो वेबसाइट द्वारा संकलित जानकारीमा लागू हुन्छ।
सुरक्षा - यस वेबसाइटले हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूको जानकारीको सुरक्षा गर्न हरेक सावधानी अपनाउँदछ। जब प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइट मार्फत संवेदनशील जानकारी सबमिट गर्छन्, तिनीहरूको जानकारी दुबै अनलाइन र अफ-लाइन सुरक्षित हुन्छ। जब हाम्रो दान फारामले प्रयोगकर्ताहरूलाई संवेदनशील जानकारी (जस्तै क्रेडिट कार्ड नम्बर) प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्दछ, त्यो जानकारी ईन्क्रिप्ट गरिएको छ र उद्योग मानक, SSL द्वारा सुरक्षित छ। एक सुरक्षित पृष्ठमा, जस्तै हाम्रो अर्डर फाराममा, नेटस्केप नेभिगेटर र माइक्रोसफ्ट इन्टर्नेट एक्स्प्लोरर जस्ता वेब ब्राउजरहरूको तलको लक आइकन लक हुन्छ, अन-लक वा खुलाको विपरीत, जब प्रयोगकर्ताहरू केवल 'सर्फिंग' हुन्छन्।
संवेदनशील जानकारी अनलाइन सुरक्षित गर्न हामी SSL एन्क्रिप्शनको प्रयोग गर्ने बखत, हामी प्रयोगकर्ता-जानकारी अफ-लाइन सुरक्षित गर्दछौं। हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको सबै सूचनाहरू, माथि उल्लेख गरिएको संवेदनशील जानकारी मात्र होईन, हाम्रो कार्यालयहरूमा प्रतिबन्धित वातावरणमा हेरचाह गरिन्छ। केवल विशिष्ट काम गर्नको लागि सूचना चाहिने कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारीमा पहुँच प्रदान गरिएको छ। यदि प्रयोगकर्ताहरू हाम्रो वेबसाइट मा सुरक्षा को बारे मा कुनै प्रश्न छ, प्रयोगकर्ताहरु लाई एक ईमेल पठाउन सक्नुहुन्छ webmaster@jcmh.org.
विशेष अफरहरू र अपडेटहरू
हामी आवधिक रूपमा समाचार, कार्यक्रम अद्यावधिकहरू, र फन्ड जम्मा गर्ने अपीलहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई पठाउनेछौं जसले हामीसँग उनीहरूको सम्पर्क जानकारी साझेदारी गर्न छनौट गर्छन्। हाम्रो प्रयोगकर्ताहरुको गोपनीयता को सम्मान को बाहिर, हामी संचार को यी प्रकारहरु को प्राप्त छैन विकल्प प्रस्तुत गर्दछौं।
सही जानकारी अपडेट / अद्यावधिक गर्ने / मेटाउने / व्यक्तिगत जानकारी निस्क्रिय गरिँदै
यदि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी परिवर्तन हुन्छ (जस्तै जिप कोड, फोन, ई-मेल वा हुलाक ठेगाना), वा यदि प्रयोगकर्ताले हाम्रो मेलि list सूचीमा हुन चाहँदैन भने, हामी सुधार गर्ने, अद्यावधिक गर्ने वा मेटाउने / निष्क्रिय गर्ने प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्दछौं। 'व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारी। यो हाम्रो वेबमास्टरमा ई-मेल गरेर गर्न सकिन्छ webmaster@jcmh.org। वा, तल दिइएको सम्पर्क जानकारीमा टेलिफोन वा हुलाक मेलबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि हामीले हाम्रो गोपनीयता नीति परिवर्तन गर्ने निर्णय ग ,्यौं भने, हामी यी गोपनीयता कथन, गृहपृष्ठ र हामीले उचित ठानेका अन्य स्थानहरूमा परिवर्तनहरू पोष्ट गर्नेछौं ताकि हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू हामी स collect्कलन गर्ने जानकारी, हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौं, र कुन अवस्थाहरूमा, यदि कुनै मध्ये, सचेत छन्। , हामी यो खुलासा गर्दछौं।
यदि प्रयोगकर्ताहरूसँग हाम्रो गोपनीयता नीतिको सन्दर्भमा कुनै प्रश्न वा सुझावहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् सोमवार मार्फत शुक्रवार, 8:०० बिहान :00:०० बेलुका निम्न माध्यमबाट:
टेलिफोन: 303-425-0300; टोल फ्री 1-800-201-5264
हुलाक ठेगाना: 4851 200१ स्वतन्त्रता स्ट्रीट, सुइट २००, गहुँ रिज, CO 80033००XNUMX।